साथी जस्तै बुवा छोरी,आमा चाईनिज, बुवा नेपाली- छोरी यति राम्री ।(भिडियो) « Np Online TV
साथी जस्तै बुवा छोरी,आमा चाईनिज, बुवा नेपाली- छोरी यति राम्री ।(भिडियो)
बिगत १६ बर्ष अगाडी देखि साँगितिक क्षेत्रमा क्रीयाशील सँगीतकर्मी चेतन राज कार्की आजभोलिका निकै नै ब्यस्त सँगीतकर्मी हुन । १४/१५ बर्षको कलिलो उमेरदेखि नै हातमा गिटार खेलाउँदै हिडेका चेतन निकै नै प्रतिभाशाली छन । उनलाई गिटार मात्र नभैइ प्राय सबै बाजाहरुको राम्रो ज्ञान् छ र बजाउन पनि उतिलै सिपालु छन । आज भन्दा केही बर्ष अगाडीसम्म ऊनी म्युजिक ईन्स्टिच्युचमा गिटार लगायत अन्य बाजाहरु र स्टाफ नोटेसन सिकाउथे ।
पछिल्लो समय चेतन आफ्नो छोरीसँग पापा पुगु नामले युटुबमा भ्लग पनि बनाउँछन् । जुन निकै हिट छ । उनी सँगै उनको छोरीका हजारौं फ्यान छन् । साथै यो जोडी यतिबेला अन्तर्वार्ताहरुमा पनि भाईरल छ । सानै बर्षमा चिनयाँ युवतीसँग बिहे गरेका चेतन र दिक्षिता बाबु छोरी जस्तो हैन, साथी जस्तो देखिन्छन् । बिहे अघि नै जन्मेकी दिीषता १४ बर्षकी भईन् । कसरी भयो चिनियाँ र नेपालीको बिहे ? कसरी भयो डिभोर्स ? हेर्नुहो भिडियो: